नलैजाऔं ‘कोरोना कोसेली’ - ७ कार्तिक २०७७, NepalTimes
काठमाडाैँ : चाडपर्वमा मान्छेको मोबिलिटी बढेको छ। काठमाडौंलगायत सहरबाट मानिसहरू गाउँ जाँदा संक्रमण पनि अब गाउँमा फैलिने सम्भावना बढी छ’, डा. वन्त भन्छन्, ‘गाउँ मात्रै होइन, सहरभित्रै पनि अझै फैलिने चिन्ता र सम्भावना उत्तिकै छ।’
डा. वन्त अब संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार÷व्यवस्थापन दुई उपाय रहेको बताउँछन्। ‘संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने दुई पाटो छ’, उनी भन्छन्, ‘संक्रमणको रोकथाम र संक्रमितको व्यवस्थापन। तर, अहिले दुवै कुरामा हामी चुक्यौं। संक्रमण रोकथामका लागि आमनागरिक र सरकार दुवैको भूमिका हुन्छ। अझ महŒवपूर्ण भूमिका आमनागरिकको हुन्छ। तर, संक्रमितको व्यवस्थापनको चरणमा गएपछि त्यसमा बढी भूमिका सरकारको हुन्छ। किनकि व्यवस्थापनका लागि नागरिक आफैंले अस्पताल बनाउने कुरा हुँदैन।’ संक्रमण रोकथाम गर्न नसके स्थिति योभन्दा विकराल हुँदै जाने उनको अनुमान छ।, याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छापिएकाे छ ।